त्यहाँ एक पानी पार्क डेटिंग रूसी महिला छ? गाउँमा पानी मनोरञ्जन केन्द्र
क्रास्नोडार क्षेत्र को Gelendzhik क्षेत्र स्थित एउटा गाउँमा - रूसी महिला डेटिङ। आज गाउँमा शायद एक शान्त दक्षिणी प्रान्त छ। सारा सिजन भर यो सबै रूस देखि पर्यटक धेरै आकर्षित गर्छ। आगंतुकों सुन्दर समुद्री तट र विभिन्न प्रकारका मनोरञ्जन सुविधा प्रशस्त गाउँमा स्वागत। एक पानी पार्क रूसी महिला डेटिंग पनि छ। थप ठीक, त्यहाँ पनि पानी आकर्षण को दुई सेट छन्। तपाईं कुन रोज्नुहुन्छ?
"Emerald आइल" - गाउँमा को केन्द्र मा एक पानी उद्यानलाई
रूसी महिला डेटिंग को दिल मा आधुनिक, ठूलो पर्याप्त र धेरै रोचक पानी आकर्षण को दायरा छ। यसको नाम - "Emerald शहर।" र साँच्चै, टिकट vacationers खरीद पछि शाब्दिक जादुई भूमि हस्तान्तरण। यो पानी पार्क परिवार छुट्टी लागि रूसी महिला डेटिंग। यसका इलाका मा बच्चाहरु को लागि 21 आकर्षण र 13 वयस्कहरूको लागि स्लाइडहरू छन्। तिनीहरूलाई बीच पानी खेल को केन्द्र को लागि विशेष डिजाइन अद्वितीय ढलान छन्। यो जटिल मनोरञ्जन सुविधा को निर्माण अघि यहाँ थियो रूखहरू र वनस्पति को एक ठूलो संख्या खुलिरहेको। यो पानी पार्क कारण धेरै राम्रो र राम्रो-राखिएको देखिन्छ। वरिपरि पूल ठूलो सजावटी मूर्तिहरु धेरै संख्याले र, थिम्ड क्षेत्रमा र छोराछोरीको खेल "paddling" को क्षेत्रमा छन्।
"Emerald शहर" - एक पानी पार्क डेटिंग रूसी महिला: पर्यटकहरुका लागि फोटो र जानकारी
गाउँमा को हृदय पानी मजा को जटिल, निम्न ठेगानामा: उल। रातो partisans, डी। 59. पानी पार्क, तपाईंले नगद वा बैंक कार्ड द्वारा भुक्तानी गर्न सक्नुहुन्छ। टिकट लागत मा यात्रा र स्नान को अवधि को चयन दिन निर्भर गर्दछ। वयस्क दिन टिकट बारेमा 1000 rubles लागत। परिसर मा दिन को समयमा बाहिर एनिमेसन कार्यक्रम र साँझ discos फोम लगे छन्। कृपया डेटिंग रूसी महिला र बच्चाहरु र वयस्क लागि खेल गतिविधिहरु Waterpark - यो योग, एक्वा एरोविक्स, छोराछोरीको व्यायाम र अभ्यास stretching परिसर छ। पानी मनोरञ्जन लागि केन्द्र आफ्नो क्षेत्रमा आधुनिक पूर्वाधार धेरै क्याफे संचालित छ। यो इलेक्ट्रोनिक ताले संग सहज लकर प्रदान गर्दछ। ऊंचाई मा पानी पार्क मा सुरक्षा: नजिकै पूल सधैं अनुभवी निर्देशक द्वारा staffed छ, उपकरण नियमित परीक्षण गरिएको छ। यसको इतिहास भर जटिल पानी मनोरञ्जन काम चोट र व्यक्तिगत चोट संग सम्बन्धित गम्भीर भ्रष्टाचार मा देखा कहिल्यै।
मनोरञ्जन पार्क "Malibu" एक पानी पार्क संग
एक रूसी महिला डेटिंग पर्यटकहरु को मनपर्ने गन्तव्यहरू को - खुला हावा मा एक ठूलो मनोरञ्जन केन्द्र। यो पार्क "Malibu" भनिन्छ, र आफ्नो क्षेत्रमा पनि एउटा सानो तलैया र धेरै स्लाइडहरू को निर्वाचकगण, बच्चाहरु को लागि एक मिनी पानी पार्क संचालित। पानी क्षेत्र 9:00 देखि 21:00 गर्न दैनिक खुला छ। परिवार र चरम गर्न साना लागि रेल र swings देखि - पानी पार्क साथै "Malibu" आकर्षण को एक किसिम छ। पनि पार्क मा त्यहाँ एक आधुनिक 5D सिनेमा, नाइट क्लब र पट्टी क्लब हो।
के Waterpark महिला सबै भन्दा राम्रो डेटिङ? समीक्षा
बिदाको समयमा गाउँमा सबैभन्दा vacationers पानी खेल को केन्द्र भ्रमण गर्न चाहन्छु। के एक्वा को दायरा डेटिंग रूसी महिला चयन गर्न सवारी छ? गाउँमा को मनोरञ्जन केन्द्र नकारात्मक समीक्षा गर्न गाह्रो छ। यो कि, कुनै कुरा तपाईं जटिल पानी कसरी गतिविधिहरु चयन, तपाईं लामो रूसी महिला डेटिंग बाँकी सम्झना हुनेछ हो।
पानी पार्क "Malibu" मुख्यतया बच्चाहरु उद्देश्य छ। यो वयस्क पानी सवारी सवारी रुचि छैन जो परिवारको लागि एउटा ठूलो विकल्प छ। आमा र बुबा र छोराछोरी भन्दा कुनै कम जस्तै ओरालो, यो अर्थमा बनाउँछ यदि जान "Emerald शहर।" पानी को यो जटिल मा वयस्कहरूको लागि पर्याप्त आनन्द हाल्छ।
रूसी महिला डेटिंग Waterpark "Malibu" धेरै पाहुनाहरूलाई देखि सकारात्मक समीक्षा छ। तिनीहरूलाई अनुसार, यो तपाईं एक मनोरञ्जन पार्क वा सिनेमा जाँदैछन् घटनाको एक यात्रा लायक छ। सामान्यतया "Malibu" पनि साना बच्चाहरु मा स्नान को सबै सुख 1.5-2 घण्टा समय छ आनन्द। तपाईं पानी गतिविधिहरूको केन्द्र जान र त्यहाँ पुरा दिन खर्च गर्न चाहनुहुन्छ भने, "Emerald शहर।" चयन तिनीहरूले उपकरण मा धेरै फरक भएकोले तिनीहरूलाई बीच रूसी महिला डेटिंग अर्थमा बनाउन गर्दैन दुई पानी पार्क तुलना गर्नुहोस्, एक यात्रा, यो संरचनाको लागत, तर प्रत्येक कक्षा लागि एकदम राम्रो छ।
Buda महल: फोटो, ठेगाना
जो नदी शीतकालीन शहर मा? दुई नदी मा
इतिहास, शैलीहरू, कसरी लागू गर्न: उनको फिर्ता र पाखुरामा Mehendi
नीलो लेक, बेलारुस। ब्लू लेक मा आराम
आफ्नो हातमा एक कार मा इन्धन अर्थव्यवस्था। आफ्नै हातमा "Ecotop"